Izvo hazvisi nyore sekukwirisa-kupinda muindasitiri. Masayiti senge edu anoshanda nevadyidzana pamisangano yakagovaniswa nevatengesi nevatengi. Isu hativape mukana kune yedu runyorwa, asi kazhinji tinounganidza email kero pamwechete kuti tiite mishandirapamwe pa. Icho chave chiri chikuru musoro. Vesevhisi veemail havana basa nezve yako optin nzira kana yako odhita nzira. vanongofungidzira kuti uri spammer.
ESPs seMailChimp vakashandisa ungwaru pa email kero mune system inonzi Omnivore. NaOmnivore, Mailchimp yakatumira yambiro zviuru makumi mashanu ndokuvhara maakaunzi makumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu anegumi mugore rimwe chete. Vanogona kusimudzira chokwadi chekuti maakaunzi aya aive akaipa ... ndingati vazhinji vacho aingova makambani anotumira kune avo rondedzero uye vasingashandise maitiro akanakisa.
Maererano neJupiter Research, zvinopfuura makumi maviri muzana zvekunyoreswa kweemail zvine typos, syntax, domain uye zvimwe zvikanganiso. Kuita chimwe chinhu chakareruka sekutumira kune yekare runyorwa uko chimwe chikumbaridzo cheemaimeri adhiresi mabhureki anogona kudzika chikumbaridzo chavo. Izvo hazvina kushata. Pasina kutaura bots kunze uko kusundidzira SPAM kuteya email kero kuburikidza masisitimu mazuva ese kuyedza kukubata iwe. Izvo zvinosetsa, mumaonero angu, ndezvekuti ndinotenda zviri nyore kuti SPAMMER iwane email mubhokisi rako rekunyora pane yepakati kambani inotumira meseji chaiyo.
Yakaderera Vhura Mitengo - Kana usiri kuyera yako inbox yekuisa mwero uye uine yakaderera yakavhurika mitengo, ako maemail anogona kunge achienda kune zvisina kuchena folda nekuda kwemazhinji spam misungo uye bounced email kero.
Re-Engagement - Kana iwe uine runyorwa iwe rwausina kutumira kwarwo mumwedzi, iwe uchazoda kuchenesa runyorwa kuti udzivise spike muma bounces anogona kukanganisa ako ekuendesa mareti.
Kushandiswa kweaya marondedzero ehutsanana masevhisi anogona kunatsiridza huwandu hweemail izvo zvinoumba kuinbox, deredza njodzi yako yekuvharirwa neInternet Service Provider, uye kuderedza njodzi yekudzingwa neMupi Wako Webasa Provider ... ivo vanokodzera iyo inishuwarenzi kana iwe uine yekare chinyorwa kana uri kubatana pane imwe. Ramba uchifunga kuti haumbofi wakasvika zana muzana pazvinyorwa zvako. Vanhu vanochinja mabasa uye vanopa kazhinji, vachisiya avo ekare maemail kero.
TheChecker - Zviuru zvevashandi vanobva kunyika makumi masere kana makumi masere vanovimba nekutenderera kwedu kweemail yakawanda uye nemameseji ekuchenesa masevhisi.